Last updated: Oct. 15 2019 | 3 min akhri
Xilligan la joogo waxaan ahay ee xiriir la leh qof dumar ah oo la yaab leh. Iyadu waa qurux, waxgarad iyo dhedig. Iyadu waa wax walba oo aan abid codsan kartaa in. Waxa kaliya ee in mararka qaar ay iga careysiisaa waa iyada eey yar in had iyo jeer bilaabo inuu hinaasay, mar kasta oo aan soo dhunkado ama salaaxdo.
Waxaan ula jeedaa, Waxaan jeclaan eeyaha iyo waxaan sidoo kale leedahay ey ku nool meel aan waalidka laakiin weli waxaan xanaaqo xaqiiqada ah in aan anigu waxaan iyada shumin karaan iyaga oo aan tinnitus ka Barking ee iyada eey Galinayso. Waxaan xitaa bilaabay in ay neceb wax in yar, ilaa aan ogaaday in uu laga yaabo in ay fure u tahay in xidhiidhkeenii faraxsan.
Waan ogahay waxa ay codadka gebi ahaanba waalan laakiin in ayaan ka fikiray oo ku saabsan sifooyinka shakhsiyadda iyo tayada saaxiibtay, ayaa in ka badan waxaan ogaaday in eey ayaa saamayn iyada iyo wax ka badan ayaan ka fikiray.
Xitaa aan islahaa waa sida gabadha saaxiibtay noqon lahaa haddii aan doonaynin in la soo jeediyay in hab in loo ogol yahay, iyada oo si is ogow of qof kale oo. Waxaan garawsannay in inkasta oo ay weli waan ka xanaaqaa marka iyada eey ma joojin foodhi, Waxaan ku qasbanahay inaan u mahad celiyo dad ku fiican uu ka caawiyey iyada si ay u noqdaan. Waxaan ugu danbeyn ogaaday in dhacaya jacayl leh gabar kaasoo eey waxaa go'aanka ugu fiican ee aan abid yeelilahayn.
Waxay barteen in ay mas'uuliyadda
Mararka qaarkood waxaan dareemayaa in caruurta maalmahan kor u waalidkood, halkii is sara kiciyey, oo ay waalidkood. Waxaa ka dhashay in aanay fursad u helaan si ay u horumariyaan dareen masuuliyaded, sababtoo ah qofna iyaga oo bara waxa ay ka dhigan tahay in ay mas'uul ka tahay wax ama qof.
Haddii aad ogaato in gabadha aad shukaansi leeyahay gabi ahaanba dareen ma mas'uuliyadda, ayay u badan tahay waligood eey. Qof dumar ah oo la eey u koraa si toos ah u barto si ay ula wareegaan mas'uuliyadda qof kale oo.
Waxay leedahay in isaga la socon, ayay u leedahay in ay ku quudisaan waxayna Leedahay u qaado xoolaha marka isagu wuu bukaa;. Waxyaalahan oo dhan ayaa kuwa u baahan yihiin si qayrul masuulnimo ah. Marka aad shukaansi gabar oo uu leeyahay dareen ah ee mas'uuliyadda qof kale oo, Waxa kale oo aad noqon kartaa waana hubaa in dareen mas'uuliyadeed waa sii weyn marka ay timaaddo aadanaha.
Xaaladan weligaa inaad ka fikirto in ay qoys naag, fiican waa in aad ilaa lagu xiriir la leh gabar oo uu leeyahay dareen masuuliyaded.
Waxaad yaqiinsanaysaa in ay Personality a Daryeelidda
Ma waxaad wax number mid ka dhigaya nin oo ku faraxsan in ay xiriir la ogaado? Ha, wax tiro ka mid ah waxaan rajeyneynaa inaad ka baxdo xiriir waxba u qaban galmo leeyahay. Waxa aanu doonaynaa waa qof dumar ah oo ku haynaya oo naga mid ah. Ragga doonayaan in haweenka oo laheyn shaqsiyada daryeel.
Tani waxba u qaban taga ee aynu doonayno in aynu loola dhaqmo sida boqorrada in xiriir uu leeyahay. Dhammaan waxaannu doonaynaa waa in ay dareemaan in gabadha aan wada jira la runtii ina daneeyo. Haddii ay jirto hal nooc oo gabar yaa ka doonaya in ay daryeel aad ah qaadan ka badan gabar kasta oo kale, markaas waa gabar qaba eey.
Daryeelka eey u baahan yahay waqti badan iyo samir. Waxaan marnaba la kulmay qof dumar ah oo haystay eey oo aan lahaa shakhsiyadda daryeelka. Hubi in gabadha oo aad aakhirka in xiriir la doonayaa in uu is ogow uxuu kale, aad oo ay ku jiraan.
Iyadu ma aha baradhada Couch a
Waxaan aad ugu xamaasadeeysan oo ku saabsan ciyaaraha. Waan jeclahay inaan tago bilaabeen orod iyo in ay hawada cusub. Maadaama u ahaa xaqiiqada ah in aan xiiso faqri maalintii oo dhan in TV-ga hortiisa ma ihi halka aan heerka fitamiin D helo hoose iyo hoose, Sidoo kale waxaan ahay xiiso uma shukaansi baradhada Gogol.
Haddii gabadha aad shukaansi leeyahay eey, aad hubi kartid in ay wax laakiin dadka baradhada Gogol caajis. Haddii aadan rabin in ay dhalìtaanka eey dhan in ka badan dhulka u, waa in aad adiga oo eey ku socdaan ugu yaraan laba jeer maalintii.
Waxaan idiin ballanqaadayaa, in gabadha qaba eey halkii ay ku kharash gareeya iyada waqti ka baxsan firfircoonaan, halkii ay iyada waqti lumin sariirtay. Inkasta oo aan ahay careysiisay by eey gabadha saaxiibtay marka uusan joojin foodhi, Waan ku raaxaysan marka aan socod qaado isaga la.